मनकामना माईको दर्शन गरी भेटि स्वरूप एक शेयर गरौं ! मनोकामना पुरा हुनेछ - Gorkhali Post
मुख्य पृष्ठ /राशिफल/मनकामना माईको दर्शन गरी भेटि स्वरूप एक शेयर गरौं ! मनोकामना पुरा हुनेछ
मनकामना माईको दर्शन गरी भेटि स्वरूप एक शेयर गरौं ! मनोकामना पुरा हुनेछ
मनकामना/मनोकामना भगवति गोरखामा अवस्थित मनकामना मन्दिर एक महत्वपूर्ण देवीस्थान मानिन्छ। मनले चिताएको इच्छा पूरा गर्ने भगवती भन्ने अर्थमा मनकामना नाम रहन गएको हो। गोर्खाका राजा राम शाहकी रानी स्वयं मनकामना भगवतीको अवतार थिइन् भन्ने जनविश्वास छ। दशैंमा पूजा गर्न आउनेहरूको यहाँ ठूलो भीड लाग्ने गर्छ। यहाँ प्रत्येक अष्काटमी दिन बलि चढाउने गरिन्छ। मनकामनाको दर्शनले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ।
यो मन्दिरको पुजारीहरू भने मगर जातीको ‘पिथकोते’ थरको हुने पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको खस र मगर सेनाहरूले लिम्बुवानी सेनालाई हराएपछि यहिं आएर लखन थापा मगरले देविलाई बलि भेट गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। मनकामना मन्दिर, गोर्खा जिल्लाको सदरमुकामबाट दक्षिणपुर्वी भागमा अवस्थीत छ । यो मन्दिर गोर्खाको सदरमुकामको पोखरीथोक बजारबाट १२ किलोमिटर दक्षिण, तनहुँको आबुखैरेनीदेखि ५ किलोमिटर पूर्व र चितवनको मुग्लिनबाट २६ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित रहेको छ ।
समुद्री सतहदेखि १३०३ मिटरको उचाईमा अवस्थित यो मन्दिरको परिसरबाट दक्षिणतीर महाभारत लेक र छिम्केश्वोरी डाँडा साथै उत्तरी भागमा अन्नपुर्ण हिमाल र मनास्लु हिमालका चुचुराहरु देख्न सकिन्छ । मन्दिर प्रांगणबाट दुवै समयमा सुर्योदय र सुर्यास्तको मनमोहक दृष्य देख्न सकिन्छ । केबुलकारबाट ११ मिनेटमै मनकामना पुग्न सकिन्छ भने पैदल यात्रा गर्न रुचाउनेहरू आबुखैरेनीबाट ४ घन्टाको उकालो हिँडेर मनकामना पुग्छन्।